၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ တစ်ရက်နေ့ကတော့ စောစောစီးစီး လိုက်ပို့သူ လူကြုံ ရှိတာနဲ့ တိုပါးယိုး ကျောင်းကို ရောက် ဘုရား သွားရှိခိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ တိုပါးယိုးကျောင်းရဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဆင်းတုတော်နဲ့ ကျောင်းဆောင် ရှေ့မျက်နှာစာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပမှာ ဒီ စကျင် ဆင်းတုတော်ဟာ ဥာဏ်တော် အမြင့်ဆုံး မြန်မာမှု လက်ရာ ဗုဒ္ဓ ဆင်းတုတော်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ကိုတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ အရှေ့ဖျားက East Coast ကမ်းခြေမှာ ကုန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ ကမ်းခြေ မြင်ကွင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိတစ်ဆုံး ရှည်လျားတဲ့ သဲသောင်ပြင် ဖြူလွလွ... တ၀ုန်းဝုန်း ရိုက်ခတ်တဲ့ လှိုင်းခေါင်းဖြူ ပင်လယ်လှိုင်းလုံးကြီးတွေ စတာတွေ............ မရှိပါဘူး.... အဲဒါတွေ တွေ့ချင်ရင်တော့ ငပလီသွားပါ... ချောင်းသာသွားပါ... ငွေဆောင်သွားပါ... ဒါပေမဲ့ မယုံမရှိပါနဲ့ ဒါကတော့ စင်္ကာပူရဲ့ Beach Resort ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
Man-Made Nature တွေပဲ အများဆုံးရှိနေတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ကမ်းခြေ တစ်နေရာ...
မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေမှာ Tent တွေထိုးပြီး လာရောက် နားနေကြတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခု...
Tent လေးတွေ အစီအရီနဲ့ မနက် ၈နာရီ၊ ၉နာရီ ထိုးတာတောင် မထကြသေးတဲ့ ခဏ လူယောင် ဆောင်ထားတဲ့ စက်ရုပ် ဆန်ဆန် အရုပ်တွေ...
ကမ်းစပ် တ၀ိုက်မှာ စက်ဘီးနဲ့ လျှောက်စီးဖြစ်တော့ ဟိုနားက
"မြနန္ဒာ.... လေးညို့ညို့..ရစ်ကာသန်းတော့..." ဆိုတာကတစ်မျိုး...
"စိုးမိုး... ငါ့ရင်ထဲ... လှုပ်ခါနိုင်စွမ်း...ရှိလေသူ..... " ဆိုတာက တစ်သွယ်...
"ပါးပြင်မှာ... သနပ်ခါးလေးနဲ့ ... ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာကွာ..." ဆိုတာက တစ်နည်း...
နည်းအမျိုးမျိုး... ဘ၀အစုံစုံကို ကြိုးစားဖြတ်သန်းနေရတဲ့ "အဝေးရောက်သား..." တွေလည်း... အများအပြားတွေ့ရသေးရဲ့....
ကျန်းမာရေးအတွက်.. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကြတဲ့ သက်ရွယ်စုံ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့...
New Year Party လုပ်ဖို့ Bungalow အခန်းငယ်လေးတွေကို ကြိုတင်ပြီး ငှားရမ်းရပါတယ်
ဒါတွေကတော့ East Coast ကမ်းခြေ တလျှောက် လက်ဆော့ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံ တချို့ပါ...
၂၀၀ရ ရဲ့ နောက်ဆုံးည နဲ့ ၂၀၀၈ ရဲ့ ပထမဆုံးနံနက်ခင်း ကို အမှတ်ရမှုတချို့နဲ့ ကုန်လွန် ဖြတ်သန်းခဲ့ပါကြောင်း...
Tech Tags: New+Year New+Year+Party Singapore East+Coast 31st+December
သြော် သူက vacation ထွက်နေတာကိုးရှင့် မိုက်တယ် မိုက်တယ် ဆက်သာသွား ပြီ၇င် sharing လုပ်ပေး
my site - www.website-aanmelden.eu
Feel free to surf to my web page - digitalxportal.net
Feel free to surf to my web page szakibazis.com
and women who have the need for assistance with this matter.
Your very own commitment to passing the solution all-around has been astonishingly
important and have surely helped girls just like me to realize their
targets. Your helpful recommendations indicatesalot to me and additionally to my
My website: http://www.snafu.co/